The Sneaky CPA itinyekwu 2.0 - Olee otú Iji Mepụta Simple Irè itinyekwu - Foneelu Of The Day
The Sneaky CPA itinyekwu 2.0 – Olee otú Iji Mepụta Simple Irè itinyekwu
Nnọọ Jesisco ebe a,
Big Disclaimer : pụta adịghị ahụkarị. M na ọ bụghị na-ekwe nkwa na ị ga-esi otú ahụ na-arụpụta. Ị nwere ike na-erughị, ọ dịghị onye ma ọ bụ karịa. Ọ bụ ihe niile ruo ị.
Ekele gị nke ukwuu maka mmasị na Sneaky CPA itinyekwu version 2.0. Emewo m ka a ọtụtụ ọrụ a na-egosi gị na dị ka ọtụtụ ihe-nkọwa dị ka omume kpọmkwem nzọụkwụ m wee si enweghị atụmatụ na-sucessful ka a CPA Mgbakwunye na-erughị 21 ụbọchị.
M wuru a zuru foneelu maka ị, ị pụrụ ibudata ya maka free na njedebe ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ị pụrụ ịmụta na-ewu ya onwe gị. M mere ka o kwe na peeji na-esonụ na nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka maka free.
Ma mbụ ihe mbụ…
Gịnị bụ CPA Marketing
CPA Marketing ma ọ bụ na-eri kwa nnweta (CPA), makwaara dị ka “Cost kwa edinam” ma ọ bụ na-akwụ kwa nnweta (PPA) ma na-eri kwa akakabarede, bụ ihe online mgbasa ozi ịnye ọnụahịa nlereanya ebe mgbasa ozi na-akwụ maka a kpọmkwem nnweta – n'ihi na ihe atụ a ire, click, ma ọ bụ ụdị n'okpuru (e.g., kọntaktị arịrịọ, ala banye, ndebanye wdg).
Ị na-akpata a ọrụ ma ọ bụ ego maka ịkwalite CPA enye ma ọ bụ ngwa ọdịnala.
Promotion nwere ike mere site na :
 Email mkpọsa
Ihe ọ bụla mma usoro…
Ị adịghị mkpa ike gị ngwaahịa na-emeso ahịa support ka a CPA marketer. Ma ọ bụrụ na mere ziri ezi, ọ pụrụ ịbụ nnọọ uru dị ka azụmahịa nlereanya.
Ihe i kwesịrị ịga nke ọma bụ : ihe ọmụma + edinam
Ị ga-akpa otu ebe a (ihe ọmụma). Ime ihe bụ nke gị. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ị ga-ahụ ihe ọ bụla. Ndo na-ekwu na. Ma, m chọrọ iji mee ka o doro nnọọ anya n'ihi na ị.
The Best CPA netwọk
Ụfọdụ na-enye ma ọ bụ na ngwa ọdịnala nwere ike na-ewetara gị n'etiti $0.1 ka $15 kwa dechara edinam. Na ha nwere ike ịchọta na kasị ewu ewu na CPA netwọk. Na nnọọ free isonyere. M ga-ndụmọdụ họrọ otu na-arapara n'ahụ ya dị ka a newbie.
The Best CPA foneelu
Ka iche a – anyị nọrọ $20 iji nweta okporo ụzọ (100 ezubere iche clics) iji na-akwalite a CPA enye na-akwụ $ 2 / dechara edinam.
The commoun ụzọ
N'ozuzu ebe a bụ otú ndị mmadụ na-akwalite CPA rịọ : Ha ụgbọala okporo ụzọ ha ọdịda page (a piakota page / a presell page / a saịtị ...) ka anya dị ka atụmanya iso ha nzipu ozi ndepụta, o na-ibugharị na CPA enye. Nke a na usoro ọrụ. Ma, ọ bụ obere uru karịa m «sneaky CPA foneelu» otu.
Ebe a na-ahụkarị na-esi 100 clicks
anyị 40 optins
maka 37% akakabarede ọnụego anyị nwetara 15 dechara omume.
nke ahụ bụ $30 ka revenue
$10 uru. Anyị na-na na na uru.
Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ ụgbọala okporo ụzọ ozugbo na-enye ma na-n'ozuzu na-erughị 10% akakabarede ọnụego.
Ebe a na-ahụkarị ihe site kwa na 100 clicks
10 dechara omume
nke ahụ bụ $20 ka revenue
$0 dịghị ọnwụ na-abaghị uru. Anyị na-na na na-na azụmahịa.
Sneaky CPA itinyekwu – The ụzọ ọhụrụ ugboelu CPA Ụlọrụ
Ị mkpa a «sneaky CPA foneelu» na ebe tupu ụgbọala draffic.
Gịnị bụ a «sneaky CPA foneelu» ?
Ọ bụ a foneelu wuru gburugburu multiple CPA na-enye na-enye ohere ka okpukpu abụọ ma ọ bụ ọbụna Triple gị «uru» si na otu okporo ụzọ. Ọ fọrọ nke nta na-enyere gị aka ime Ụlọrụ maka FREE.
(disclaimer: ụfọdụ nwere Mgbakwunye njikọ)
Ị ga-mkpa na-esonụ ngwaọrụ iji melite gị sneaky CPA foneelu :
 A saịtị (ngalaba aha) na / ma ọ bụ clickfunnel
 3 ka 4 CPA rịọ (Mgbakwunye na-enye na-arụ ọrụ kwa)
The usoro – The Philosophy of Sneaky CPA itinyekwu
Anyị ụgbọala anyị ezubere iche 100 clics ka ọdịda page. Mbụ ha clic eduga na-enye. Nke mbụ bụ a CPA enye ($2 ma ọ bụrụ na dechara) na nke abụọ bụ anyị optin page.
Ma ọ bụrụ na anyị na-otu stats, ebe a bụ ihe anyị nwere dị ka pụta :
site 100 clics anyị nwetara 40 optins.
Kwa optin edu na-ibugharị ka a nkwenye na peeji nke ebe clic ga-uba site 2 ọzọ. The mbụ maka ọzọ CPA enye ($2 ma ọ bụrụ na dechara) na nke abụọ na-aga na-ekele gị page.
Anyị nwere 2 CPA awade na na page ka dechara. $2/edinam.
Olee ihe enyemaka anyị pụrụ ime ka $2+$2+(2*$2)= $ 8 / ụzọ
Nke ahụ bụ n'elu $320 n'ihi na ndị niile 40 optins. Ọ bụghị ya na ị ka na-ike na-akwalite ahụ na-enye thorugh a 5 day email series. uru $300 na anyị na-ewu anyị ndepụta maka FREE.
Nke ahụ bụ ihe anyị na-akpọ «sneaky CPA foneelu». Na foneelu enyere aka tụlienụ $ 6-8 $ / ụzọ si a $2 CPA enye. The elu payout mma.
Ọ bụrụ na ị na-aga na ike a na ụdị foneelu, ka m mara ma ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ .... Ma ọ bụ dị nnọọ gaa na m nzọụkwụ site nzọụkwụ nkuzi ebe a.
Tupu ị na-aga, ebe a na-gị meere gị itinyekwu, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị oge iwu gị. M na-ekere òkè ya site clickfunnels otú ị chọrọ otu akaụntụ ha iji ibudata ya. Pịa ebe a iji ike gị na pịa ebe a ibudata gị sneaky CPA foneelu.
Ugbu a ihe bụ ihe ọzọ? -Eme ihe ma na-amalite na-akwọ ụgbọala okporo ụzọ gị na foneelu. nanị.
N'ihi na ihe nkwado, i nwere ike kpaliri anyị na [email protected]
Na-echere gị echiche kacha mma
-The itinyekwu nke ụbọchị Team